ဇတ်လမ်းလေးက ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ အပြင်မှာလည်း တကယ်ရှိမှာပဲလို့ ခံစားမိတယ် ဇတ်လမ်းဖော်ထားတာလေးကတော့ မိုက်ပါ့ တကယ့်မြင်ကွင်းထဲမှာ စာအုပ်ရောင်းတဲ့ ကောင်လေးရယ် အကျီင်္အနီကွက်လေးနဲ့ ကောင်မလေးကို မြင်ယောင်သွားတယ် ။ ဒီနေရာမှာ စာအုပ်ရောင်းတဲ့ ကောင်လေး အစား အဲ့လို မိုးတွင်းမှာ ကောင်မလေးကို မောင်းလာတဲ့ ကားက ရေစင်ပြီး ဆင်းတောင်ပန်မယ့် ဇတ်ကောင်တစ်ယောက်သာဆို ဇတ်လမ်းက တစ်မျိုးပြောင်းချင်ပြောင်းမှား) လူတိုင်း ပြောပြောနေကြသော လှလှပပ အရာတစ်ခု ကဗျာဆရာ စာရေးဆရာများ အမြဲဖွဲ့နွဲ့ကြသည့် အရာတစ်ခု က တစ်ခါတစ်လေ တော့လည်း ဂုဏ်သိက္ခာတွေ အဆင့်တန်းတွေက အဖြေထုတ်သွားတာပဲ သေချာတယ် နိုင်ငံခြား ရောက်နေတဲ့ ကောင်မလေးက ဂျင်းဘောင်းဘီ ၀တ်ပြီး သမိုင်းစာအုပ်တွေ ရောင်းတဲ့ ကောင်လေးကို ရွေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေ ဘာကြောင့်ဆို စာအုပ်သည်လေးဆိုတဲ့ အမည်နာမလေးမှာ အားကိုလောက်စရာ ပကာသနတွေမှ မပါတာ ။ အချစ်က ပဲများတယ် :)မဆိုင်တာတွေပြောခဲ့ပြီး ရစ်တက်တဲ့သဘာဝမို့ ဒေါ်လေးရေ့ ခွင့်မလွှတ်ပါနဲ့ :P
တချိန်တုန်းက ရှပ်အင်္ကျီ ၀တ်၊ ကျောပိုးအိပ် လွယ်ပြီး ပန်းဆိုးတန်းတစ်လျှောက် လမ်းလျှောက်ခဲ့ဖူးတယ်။
ခင်ထွေးရီမုန့် ဟင်းခါးလဲ စားခဲ့ဖူးတယ်...။
၀တ္ထုကောင်းလေး တစ်ပုဒ်ကို ဖတ်သွားပါတယ်...
ဟုတ်ကဲ့ တွေ့ရင် ပြောလိုက်ပါမယ် ပန်းဆိုးတန်းမှာ ဟစ်တလာ စာအုပ်လေး သွားယူဖို့..:P
ပန်းဆိုးတန်းက ဟစ်တလာ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို သတိတရရှိနေသေးတယ်..ဆိုတာကိုလား.........(နောက်တာ..နော်)။
""သည်လောက်ဆိုလျှင် ကျွန်တော်က ရန်ကုန်မြို့၏ လူစည်ကားသော ပန်းဆိုးတန်း လမ်းဘေးတနေရာဝယ် စာအုပ်အဟောင်းရောင်းသူတစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်း ခင်ဗျားတို့ကို သီးသန့်ရှင်းပြစရာ မလိုတော့ဘူး ထင်ပါသည်။""
""ဒီဇာတ်ကြောင်းက ဒီလောက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ဒါပဲ လား။ အချိုးအကွေ့ အလှည့်အပြောင်း တွေ စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေ ဖြစ်လာဦးမှာလား ဟု ခင်ဗျားတို့ ဆက်တွေးနေမည်လား။""
ဟစ်တလာ စာအုပ်ကိုတော့ လိုချင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ပိုင်ရှင်မဟုတ်တော့ ခက်တယ်။
ဖွဲ့ပုံလည်းလှတယ်။ ရေးဟန်လည်း သစ်တယ်။ စိတ်ကူးလေးကလည်းနုတယ်။ ပေးတဲ့ရသက ထိရှကျန်ခဲ့စေတယ်။ ဒီလိုလက်ရာကောင်းလေးတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ချမ်းမြေ့ပါစေ။
ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ။ အင်္ကျီအနီကွက်ဝတ်ထားတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် ပန်းဆိုးတန်းစာအုပ်တန်းမှာ လမ်းလျှောက်ပြီး စာအုပ်တွေ လိုက်ကြည့်နေတာ မြင်ယောင်တယ်။
ပန်းဆိုးတန်းကိုလွမ်းမိပါ့ ညီမပန်ရေ .. အရေးအသားကတော့ အထူးပြောစရာမှရှိဘူး .. ပန်ဒိုရာဆိုတာ ပန်ဒိုရာပါပဲ။ လေးစားတယ်။
၀ထ္ထုဆို ဝေးဝေးရှောင်တဲ့ ကျနော် ဒီတစ်ခါ အငိုက်မိသွားပါတယ်။ ဖတ်ရင်းနဲ့ ညားမယ်ထင်တာ၊ နောင်မှ .. ဒီလိုပါလားလို့ မထင်မှတ်တဲ့ရှုထောင့်ကို မြင်လိုက်ရတယ်။ တာရာမင်းဝေကဗျာထဲကလို ဆက်စပ်ပြောရရင် ဂျင်းဘောင်းဘီစုတ်လေးရဲ့ မိုးပေါ်ကို ဆန့်မြှောက်ထားတဲ့ မမီနိုင်သော ကမ်းလက်တွေဟာ ဟိုးတုန်းကလိုပဲ မြေမှုန်တွေ စွန်းထင်းလျက်ပါပဲ လို့။ စိတ်ထဲ အုံ့မှိုင်းဝေရီသွားတယ်။ ဇာတ်သိမ်းပိုင်းမှာ..။
စာအုပ် စာပေ ချစ်တတ်ကြသူနှစ်ယောက်ရဲ့ ဖြူစင်တဲ့ သံယောဇဉ်တွေကို မြင်အောင် ကြည့်သွားပါတယ် ပန်ပန်ရေ..။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀မှာ ခရီးသွားဟန်လွှဲ စိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်လေး ကိုယ်စီ ရှိကြမှာပါ။ အဲဒီ အကြောင်းလေးကို မပန်က အရေးအသား ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ ဆွဲခေါ်သွားတယ်။
ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ရောက်ရှိ ဖတ်ရှုခြင်းမှာ
စာရေးဆရာမလေးရဲ့  ဆွဲငင်သိမ်းသွင်းသွားတာကို
ခံလိုက်ရတယ်။ နောက် အမြဲ လာ လာဖတ်နေတော့မယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ဘာကိုယ် သေချာနေ
ခုမှ အမြန်စာတွေ လိုက်ဖတ်နေရတယ်။း)
မရေ... တစ်ချိန်က အဲဒီနားမှာ ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန် ခြေတိုအောင် လျှောက်ခဲ့ဖူးပေမဲ့ ကောင်မလေးကို မတွေ့မိဘူး၊ ဒါပေမဲ့ တွေ့တာနဲ့ ပြောလိုက်ပါ့မယ်။ ခုချိန်ထိ ဟစ်တလာ စောင့်နေဆဲပါလို့။
လင့်ခ်က ရှိမနေတော့ မရောက်ဖြစ်တာပါ။
အစ်မ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူးနော်. လေးစားလို့
မမ လို့ခေါ်သွားပါတယ်ရှင်။ မှားရင်လဲ ပြောပါဦးရှင့်။ :D
စာရေးကောင်းလွန်းတဲ့ မမကို ခင်မိပါတယ်။
နောက်လဲစာတွေ ဆက်ပြီးလာဖတ်ပါဦးမယ် မမ ရေ။
(မျှော်လင့်နေတဲ့ ၊ သိမ်ငယ်နေတဲ့ ၊ မရေရာတဲ့ ...
စွဲဆောင်မှု အပြည့်ရှိတဲ့ ဇာတ်လမ်း လေးပါပဲ
အဲဒီ အကျီ အနီဝတ်ကလေး က မပန်ဒိုရာ လား?
မေးလ်ထဲကနေ ရောက်လာတဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်ပြီး ကွန်မန့် မရေးဘဲ မနေနိုင်တာနဲ့ ရေးလိုက်မိတယ်။
ပန်ပန့်ရဲ့ အရေးအသားက အစအဆုံး ဖတ်ဖြစ်အောင် ဆွဲခေါ်သွားတယ်။
အဖြစ်အပျက် ရိုးရိုးလေးကို ရိုးရိုးလေး ရေးဖွဲ့ထားသယောင် ထင်ရပေမဲ့ ဇာတ်လမ်းရဲ့ နောက်ခံလေးတွေက ခေတ်ကို ထင်ဟပ်နေပြီး အချိန်နဲ့အမျှ တစစ ပြောင်းလဲခြင်းကို သတိပြုမိစေတယ်။
ပိုပြီး အိုဟောင်းလာတဲ့ မြို့ကြီး၊ ပိုပြီး ပေါက်ပြဲလာတဲ့ ပလက်ဖောင်းတွေနဲ့၊ ဒီပလက်ဖောင်းတွေကို အမှီပြုနေရတဲ့ စာအုပ်ဟောင်းဆိုင်ကလေးတွေ၊ ခင်ထွေးရီမုန့်ဟင်းခါး ... ပတ်စ်ပို့ရုံးနဲ့ အမေ့အိမ် ...
လွမ်းတယ် ပန်ပန်ရေ ...
ဖတ်ရင်းနဲ့ မျက်ရည်တွေ ၀ဲလို့ .... ။
မုန့်ဖိုးတွေ ခြစ်ချုတ်စုပြီး စာအုပ်ဟောင်းတန်း လျှောက်ဝယ်ခဲ့တဲ့ ဘ၀ကို သတိရမိတယ်။
ရှပ်အင်္ကျီအနီကွက်တော့ မ၀တ်ဖူးပါဘူး။
တစ်ဆိုင်ထဲကလည်း ခဏခဏ မ၀ယ်တတ်ဘူး.. ရောင်းတဲ့သူတွေ အများကြီးမို့ သနားလို့ မျှဝယ်တယ်.. အဲ့ဒီတုန်းက မ၀ယ်ပဲ စာအုပ်မွှေသလိုလိုနဲ့ ခိုးဖတ်နေခဲ့တာက ပိုများပါတယ်း-)
ရှပ်အင်္ကျီအနီကွက်နဲ့ကောင်မလေးကို တွေ့လိုက်တယ်... ဂျင်းဘောင်းဘီဝတ်ပြီ အင်္ဂလိပ်လို စာအုပ်တွေဖတ်နေတယ်...
စာအုပ်တွေဝယ်ဖတ်တာနည်းလာပြီး national library ကနေပြီး ငှားဖတ်တာများလာတယ်တဲ့...
ရန်ကုန်ရောက်ရင် ပန်းဆိုးတန်းကို တစ်ခေါက်လောက်လာဖို့ ပြောလိုက်ပါ့မယ်...
ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်းနဲ့ ပြန်တွေ့မယ် မျှော်လင့်ထားတာဗျာ
မတွေ့ပဲ သိမ်းလိုက်တော့ တမျိုးပဲ ခံစားလိုက်ရတယ်။
အဖြစ်အပျက်အားလုံးကို မြင်သာအောင်ေ၇းဖွဲ့ထားတဲ့ ဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ်အတွက် ကျေးဇူးပါ။
ကြိုက်တယ်… အဲဒီလိုမျိုးလေးတွေ ဖတ်ချင်နေတာကြာပေါ့….
ဒီတခေါက်အိမ်ပြန်တော့ အဲဒီနားကို ရောက်ခဲ့သေးတယ်…
ဒီပို့ စ်လေးသာ အိမ်မပြန်ခင်က ဖတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ဂျင်းဘောင်းဘီဝတ်တဲ့ ကောင်လေးကို ရှာကြည့်မိဦးမှာ… တို့ မှာလဲ ရှပ်အကျီင်္အနီကွက်လေး တထည်ရှိခဲ့ဘူးတယ်…
ပန့်အကျီင်္လေးရော… သိမ်းထားသေးလား…
အရမ်းတမျိုးပဲ ခံစားလိုက်ရတယ်.. စာအုပ်အဟောင်းဆိုင်တွေကို လွမ်းသွားတယ်မပန်.. မလေး ပြန်တုန်းက လှည်းတန်းစာအုပ်အဟောင်းတန်းသွားချင်တယ်လို့ သူတို့ကိုပြောတော့ မရှိတော့ဘူးတဲ့ ဟုတ်လားဟင်.. အဟောင်းတန်းတွေခေတ် မရှိတော့ဘူးလို့ ဆိုကြတယ်မပန်ရယ်..
အရေးအသား အဖြတ်အတောက် စကားလုံး အားလုံး အားလုံး သိပ်သဘောကျတာပဲ... မရောက်ဖြစ်တာ အတော်ကြာလို့ လာခဲ့တာ... လာရကျိုးနပ်လိုက်တာ
မောင်မျိုး ... မောင်မျိုးရဲ့ တဖက်ကလှည့်တွေးပုံလေးကလည်း ဖြစ်နိုင်ခြေတခုပေါ့နော်။
မသက်ဝေ.. အခုလွမ်းရင်တော့ အိမ်မှာလာစား။ ခင်ထွေးရီထက် သာအောင် ချက်ပေးမယ်။ :D
ှSin Dan Lar .. ကျေးဇူးပါ ညီမရေ.။
လင်းဒီပ.. တွေ့ရင်ပြောလိုက်ပါနော်။ :)
မအိန္ဒြာ.. ကြိုက်သွားတယ် ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်နော်။
ကိုအောင်သာငယ်.. အလွမ်းဓာတ်ခံ ရှိတယ် ထင်တယ်
mysterysnow .. ပိုင်ရှင်ကိုပေးပေးမယ်လို့ ပြောပြီးယူကြည့်ပါလား။ :)
ကိုဝေလင်း.. မှတ်ချက်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါနော်။ ကြိုးစားပါဦးမည်။
မီယာ.. နှစ်သက်လို့ ၀မ်းသာပါတယ်။
မတူးတူးသာ... မတူးတူးသာကလည်း မတူးတူးသာပါပဲလေ။ အပြန်အလှန် လေးစားလျက်.း)
YoungGun ..မှတ်ချက်လေးက ကဗျာဆန်နေပါတယ်။
ကိုဆောင်း.. အသေအချာ ခံစားသွားတာ ကျေးဇူးပါ။
မမိုးချိုသင်း.. ဖြူစင်မှုလေးတွေကို မြင်အောင်ကြည့်သွားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပုံရိပ်... မှန်တာပေါ့။ အမှတ်မထင် အဖြစ်အပျက်လေးတွေ..။
မဟနစံ.. အချိန်ပေးပြီးလာဖတ်တာ ၀မ်းသာမိပါတယ်။ ကြိုဆိုပါတယ် အစ်မရေ..။
မကေ.. ဖြေးဖြေးဖတ်..နောက်တခေါက်ထပ်ဖတ်။ ဒါပဲ။
အောင်မြေ.. စာကောင်းပေမွန် လို့တော့ မလုပ်ပါနဲ့။ မျက်လုံးပြူးသွားတယ်။
သိုးမလေး.. တွေ့ရင် ဆက်ဆက် ပြောလိုက်ပေါ့နော်။
မ၀ါဝါခိုင်မင်း.. မှတ်ချက်များအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်လည်း ကြုံရင် လာဖတ်ပေါ့နော်။
လွတ်ငြိမ်းလေပြေ.. အမှတ်မထင် စကားလေးတခွန်းကို မြင်အောင်ကြည့်နိုင်တာချီးကျူးပါတယ်။
လင်းထက်.. ဒီလို အလစ်မှာ မမေးကြေးပေါ့။ ၀တ္ထုဟာ ၀တ္ထုပါကွယ်.. :P
LMN .. မ.. နှစ်သက်နိုင်မယ့် စာမျိုးလို့ ထင်ခဲ့မိပါတယ်။ အခုလို တကူးတက လာမှတ်ချက်ရေးသွားတာ ၀မ်းသာမိတယ်။ သတိရတယ် မ..။
ရွှန်းမီ.. အရင်က အချိန်တွေ လွမ်းစရာပေါ့နော်။
ပီတိ.. ဘာတွေလာပြောနေလဲဟ.။ :D :P
မင်းကျန်စစ်.. အသေအချာ ခံစားသွားတာ ကျေးဇူးပါနော်။
မတန်ခူး... သိမ်းထားတာပေါ့.. အဲလေ ယောင်လို့.. ဘာတွေလာမေးတုန်း။ ဒါက၀တ္ထုပါလေ။ :P
မလေး.. မလေးနှစ်သက်မယ့် စာလို့ ထင်မိပါတယ်။ အတူခံစားသွားတာ ကျေးဇူး။
မစိုးသင့်ဆွေ.. မှတ်ချက်အတွက် ကျေးဇူးပါ။
မအေးမြတ်မြတ်ကို.. နပ်သွားလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။
ကိုဂစ်တာ.. ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ မပြောတော့ဘူး။ :)
ပြေပြစ်ကျစ်လစ်တဲ့စကားပြေ အရေးအသားနဲ့ ဇာတ်အိမ်လေး တည်ဆောက်ထားပုံ၊ ဇာတ်ဆောင်စရိုက်လေးကို
မျက်စိထဲမြင်ယောင်မိအောင် ရေးဖွဲ့ထားပုံလေးကို သဘောကျမိတယ်။
မရဲတရဲနဲ့ တိတ်တခိုး မျှော်လင့်မိနေတဲ့ ယောကျာ်းတစ်ယောက်ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်..
မိုးနဲ့မြေလို ဘ၀မျိုးတွေမှာဘဲ သိမ်ငယ်စွာ အမြတ်တနိုးသိမ်းထားမိခဲ့တဲ့ စာအုပ်လေးတစ်အုပ်..
ဘ၀မှာ ပညာတွေရှာမှီးရင်း တိုးတက်မှုတွေကို ရှာဖွေရင်း ထိပ်ဆုံးရောက်အောင် ကြိုးစားနေတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်..
ဒီဇာတ်လမ်းကို ဖတ်အပြီးမှာ ရင်ထဲရှတတနဲ့ ဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့လေး ဖြစ်ကျန်ခဲ့တယ်...။ အားပေးနေပါတယ်..။
မပန်ဒိုရေ.ဖတ်ရတာနောက်ကျသွားတယ် နောက်လည်းလင့်ပို့ပေးပါဦး..ကျေးဇူးတင်ပါတယ် တိမ်တမာန်တီးလုံးလေးနားထောင်ရင်း ဖတ်ဖြစ်သွားတယ်.